Useless opposition party complaints - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, May 21 in Politics
Kuwaan mucaaradka la baxay cabaad and baseless accusations kama dhamaado miyaa? Bilooyin ka hor ayee ahayd markee daljiraha Mareykanka ku eedeynaayeen inuu dowladda dhexe la saftay. Maantana eeda waxee la u wadaan daljiraha Midowga Afrika.
Do they think international players can play the same old game of disrespecting Soomaali governments and interfering our political affairs as they did from since 1990. Until this dowladda dhexe stopped it. Why don't they complain about what Kiikuuyo are doing in Jubbooyinka and Gedo?
If tuugii weynaa Gabre was still commanding those corrupt politicians what to do, surely they would not have dared to to complain about Xabashi mercenaries.
Somalia opposition parties voice grave concern over presence of non-AMISOM troops in Somalia
Salaad Cali Jeelle oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
Hoggaamiyaha Xigbiga Midnimada Dimuquraadiyadda Salaad Cali Jeelle, oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha kiiska badda iyo go’aanka ay maxkamadda ICJ dib ugu dhigtay dhageysiga dacwadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxuuna naqdiyey qaabkii uu malin ka hor uga hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in ICJ aysan Soomaaliya waxba ka weydiinayn go’aankeeda, isla markaana ay ku qasbaneed inay aqbasho dalabka Kenya, maadaama sida uu sheegay ay ku war gelisay in aysan diyaar u aheyn sababo jira awgood.
“Shalay waxaa arinta badda ka hadlay Xasan Sheekh, horay Xasan Sheekh heshiiskii is afgaradka ahaa ayuu usoo noo leeyay, markii uu dhinac u dhaqaaji waayey ayuu go’aankii baarlamaanka awgiis waxaa khasab ku noqotay ama Ilaaheyba ka waafajiyee in markii dambe uu maxkamadda caalamiga ah geeyo, taasina waxay aheyd shaqadii laga rabay qof mas’uul ah oo Soomaaliyeed” ayuu yiri Salaad Cali Jeelle.
Isaga oo hadalkiisa sii watay ayuu yiri,Shalay Xasan Sheekh hadalkiisa waan fiirsanaayey, cid uu la hadlaayo waan garan waayey, maxaa yeelay hadii dib loo dhigay oo Corona loo sababeeyay, in uu isagu inta iclaamka tago niyad jab ku rido umadda Soomaaliyeed, waxaaba u moodaa dad kale in uu la hadlaayo kolba Soomaali lama hadleyn.”
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa sidoo kale sheegay in Xasan Sheekh uu u muuqdo nin loolan siyaasadeed ku gelaaya arinta badda.
“Badda Soomaaliya ninkii wax kasoo dhicinaaya oo garab taagan, waa loo wada baahan yahay, laakiin in Xasan Sheekh meeshaas loolan ka raadiyo oo dhaho afar sano ka hor meeshii aan uga tegay ayey joogtaa, mana joogto oo waxay gacanta u gashay maxkamadda caalamiga ah, marka yaan laga af miishaareyn shacab Soomaaliyeedna waa inay ogaadaan gacan amaan ah inay ku jirto hantidoodii” ayuu yiri mar kale Salaad Cali Jeelle.
Salaad Cali Jeelle is responding to this:
Mar kasta oo Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay Xukuumadda dhaliilaan ama Madaxweyne Farmaajo u soo jeediyaan arrimo jawaab uga baahan, waxaa si halhaleel ah ugu jawaaba siyaasiin ay isku hayb yihiin sida Salaad Cali Jeelle iyo kuwo kale.
Waa xildhibaan mucaarada waxa sidaa u fekeraya.
Maalintii usc loo ducaynayay goob joog baan ahaa.
3 minutes ago, gooni said:
Maalintaan Guriga Ummadda lagu shiraaye mee ahayd:
Golaha Shacabka aad u qurxoonaa.
23 minutes ago, Miskiin-Macruuf-Aqiyaar said:
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig, oo ka mid ah siyaasiyiinta is-beddel doonka Jubaland ee la heshiiyey Axmed Madoobe, ayaa sheegay inay furi doonaan gal dacwadeed ka dhan ah wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira.
Cabdirashiid Xiddig ayaa sheegay in Madeira uu khudbaddii uu ka jeediyey shirkii Golaha Ammaanka ee Arrimaha Soomaaliya uu ugu gafay beel Soomaaliyeed.
Madeira, oo sidoo kale ah madaxa howl-galka Amisom, ayaa heshiiskii uu Axmed Madoobe la gaaray qaar ka mid ah xubnihii kasoo horjeeday ku qeexay “heshiis hoosaad qabiil.”
“Jublanad, waxaan la soconnaa in isbeddelo ay ka jireen dhowaan, ayada oo hogaamiyaha Jubaland iyo xubnaha mucaaradka beesha Ogaadeen ay gaareen heshiis la isku aqoonsaday waxna lagu wada wadaagay,” ayuu Madeira ku yiri hadalkii uu ka jeediyey kulankii Golaha Ammaanka ee Arrimaha Soomaaliya.
Cabdirashiid Xidig ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda Federaalka inay dalka ka saarto Wakiilka Midowga Afrika, isaga oo ku eedeeyey inuu Arrimaha gudaha ee Soomaaliya uu faragalin ku hayo.
Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa horey ugu eedeeyey Madeira inuu ku milmay siyaasadda gudaha Soomaaliya, isaga raali ka noqday in dowladda federaalka ay adeegsato ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka tirsaneyn Amisom.
“Xadgudubyada la iska indho-tiray ay ciidamada Itoobiya ku hayaan madax-banaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya waxaa qeyb ahaan mas’uul ka ah guul-darrada wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Francisco Madeira, kaasi oo laga rabay inuu xaqiijiyo in sumcadda Amisom aysan waxyeeleyn damac juqraafi siyaasadeed ee xubin ka mid ah,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xisbiyada mucaaradka, 21-kii May.
Dacwad ka dhan dowladda Kiikuuyada goormee Xiddig iyo xirtiisa furi doonaan?
Nimankaanu mabda' maleh waligoodna ma yeelan.
Madoobe iyo ayagu waxay isku qabteen qabiil ma'ahayn, waa doorasho khaldan oo aan sharciga waafaqsanayn, in badana way ku doodeen ayagoo beesha caalamka hor taagan.
doorashadii lama sixin, waxaa kaliya oo ay saxeen in jufadu hal nin u dayso ku tumashada sharciga.
Waa hadal sax ah waxa gudoomiye madeira sheegay wax ugasoo noqon karaa iima muuqato aragtidayda.
Hadii ay qabiil ugu tanaasuleen walaalkood waxay ahayd inaysan mujtamaca soo hor istaagin mar danbe oo xoogaaga ay qaateen ku ganacsadaan.
Nasiib daro garashadaas ma leh waxay u haystaan madoobe sharciguu ku xad-gudbay inuu beeshooda kaliya khuseeyay ama ayaga gaar ahaantooda taladii jubaland uu ka dhacay.
Kuukuyadu waligood waxay isu keeni jireen warlord iyo qabiilo is haysta wax cusub kuma aha in soomaalidu uunsiga u shido.
kaliya inay kismaayo ku joogaan rabsho la'aan inta la helayo madaxweyne soomaaliyeed oo ka wanaagsan farmaajo dacwadiina dib ulasoo noqda hadafkoodu waa cad yahay waa xagal toosan.
Waxaa jira saxiix ay hore uga faa'iideen oo ina cigaal nfd ugu xalaaleeyay asagoo ku sheegay (memorandum of understanding)
Shakhsiyadda xidig waxaan ka xasuustaa dawladii xasan shekh, yuu wuxuu ku noqday mucaarad microphone' kii kor loo taagaba qabsada.
Waa markii ugu horaysay aragtidayda oo uu xasan shekh la taliye fiican helo, wuxuu u dhiibay ama madax uga dhigay gudi qaybiya raashinka barakacayaasha oo aan filayo inuu khibrad hore lahaa, hadal dambe maalinkii xilka loo dhiibay yaa ugu dambaysay.
Waa dadka hungurigooda hadalka ku qooya wax principle malaha.
Shariifka isma xasuusto mise labawajiilenimada waala caadi markuu madaxtinimadiisa ku darsanaaye sanad ka badan bartamihii sanadkii 2011.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa war kasoo saaray go’aankii shalay wartiga loogu kordhiyay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya.
Shariifoow laga bartaa laga badiyaa. Don't forget Juun, 2011 waxaa adiga iyo Shariifka kale ku sameyseen in Kambaala.
Wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa muddo kadib dib ugu soo laabtay xerada Banyooley ee ku dhow xuduudda Kenya iyo gobolka Gedo, kadib markii uu safar muddo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.